■ ကမ္ဘာ့ပထဝီနိုင်ငံရေး ချိန်ခွင်လျှာပေါ်က မြန်မာပြည်အရေး ဘယ်လို အလားအလာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသူ ဦးအောင်သူငြိမ်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ https://youtu.be/icIxeAJwxJk
ကိုဗစ် ကာကွယ်ရေး အရပ်ဖက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးလို့ ရသမျှ အားလုံးကို ပံ့ပိုးကူညီကြဖို့ ပြောကြား
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အရပ်ဖက်က ဆောင်ရွက်ပေးလို့ ရသမျှ နေရာအားလုံးမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ လက်တလော စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ရောဂါကူးစက်မှု အခြေအနေ မြင့်မားနေတဲ့...
ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း 36,372,696 ဦးနဲ့ သေဆုံးသူပေါင်း 1,059,065 အထိ ရောက်ရှိလာတယ်လို့ ဂျွန်ဟောကင်းတက္ကသိုလ်က ပြုစုထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက ညွှန်းဆိုနေပါတယ်။
နိုင်ငံတွင်း ကိုဗစ်လူနာပေါင်း ၂၂,၄၄၅ ဦးနဲ့ သေဆုံးသူပေါင်း ၅၃၅ ဦး အထိရှိလာ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ လူနာစုစုပေါင်း ၂၂,၄၄၅ ဦးနဲ့ သေဆုံးသူ ၅၃၅ ဦးအထိ ရှိလာတဲ့အကြောင်း အစိုးရရဲ့ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ (၈) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည...
THE STREAMIZ SHOW
MCN | NEWS ANALYSIS
ဒီနေ့ သတင်းသုံးသပ်ချက် ထုတ်လွှင့်မှုတွင် “တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ : မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (စီစီပီ) သို့ စာ နှစ်စောင်” EAOs & China: Two Letters from Northern...
❖ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ဘေးဆိုးနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းကြရမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရက် သီတင်း (၂) ပတ် သာ လိုချိန်မျိုးမှာ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးမူဝါဒတွေ အဓိကပါဝင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ မနေ့က လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ...
ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့် အယူအဆ တိုင်းရင်းသားတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်း
❖ အာဏာရ NLD ပါတီနဲ့ အင်အားမမျှတပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးမှာ အပြိုင်ကျဲ ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့် နိုင်ငံရေးအယူအဆ ပိုအားကောင်းလာခဲ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေကို သုံးသပ်နိုင်ဖို့ Last Week Tonight အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဖိအား လျှော့ပါးရေး အဆင့်မီတရားစီရင်ရေး အမှန်တကယ် ဖြစ်ပြီလား
❖ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာဖိအား လျှော့ပါးရေး အဆင့်မီ တရားစီရင်ရေး အမှန်တကယ် ဖြစ်ပြီလားဆိုတာနဲ့ အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက် တရားစီရင်ရေးတွေ ကောင်းမွန်စွာ အမှန်တကယ် လည်ပတ်ဖို့ ဘယ်လောက်အရေးကြီးနေလဲဆိုတာ Last Week Tonight အစီအစဉ်မှာ သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
ICC အရေး နှပ်ကြောင်းပေး ပြောဆိုမှု အချုပ်အခြာအာဏာ ဆော်ကားမှုဟုဆို
❖ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်ဟာ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ် လုပ်ဆောင်နေပြီး အဆင့်မီတဲ့ တရားစီရင်ရေး ဖြစ်တာကြောင့် အဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးကို ကျော်လွန်ပြီး နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး ICC အရေး နှပ်ကြောင်းပေး ဆောင်ရွက်ပြောဆိုနေသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်း တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို စိန်ခေါ်နေကြတာ...
AA ထုတ်ပြန်ထားသည့် စစ်သုံ့ပန်းများကိစ္စအား တပ်မတော် တရားဝင် တုန့်ပြန်
❖ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (ရက္ခိုင့်တပ်မတော် - AA) က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ စစ်သုံ့ပန်းအချို့ရဲ့ ရုပ်သံဖိုင်တွေကိစ္စအပါအဝင် လက်တလော ရခိုင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် တပ်မတော်က တရားဝင် တုန့်ပြန်လာပါတယ်။ ❖ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၆...
❖ ရှစ်လေးလုံး လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေ ပြည်သူလူထုက တောင်းဆိုလိုက်ကြတဲ့ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေး၊ တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ တော်လှန်ရေးရဲ့ သွေးသစ္စာကို လူထုအစိုးရ ဘယ်လောက်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီလဲ။ ❖ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ငံရေးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ အာဏာရ...
အပြိုင်ကျဲ မဲဆွယ်မှုတွေကြောင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ထိခိုက်နိုင်မလား
၂၀၂၁ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းကောင်းတချို့ ကြားရလိမ့်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ ဆိုမိုင်ယာ ဆွာမိနာသန်က ပြောပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပဲ ကာကွယ်ဆေး...
COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလအတွင်း စာသင်ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရစဉ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ကျောင်းသားကလေးငယ် သုံးပုံ တစ်ပုံဟာ အချိန်၊ နေရာတွေ မလိုဘဲ အိုင်တီနည်းပညာ အသုံးပြု သင်ကြားနိုင်တဲ့ virtual ပညာရေးကို မရရှိနိုင်ဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ သြဂုတ်လ ၂၆...
ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တွန်ရွန်တိုမြို့မှာ ရဲတွေက လာရောက်စဉ် လူမည်းအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး တိုက် ၂၄ ထပ်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသေဆုံးမှုမှာ ရဲခြောက်ဦး အပြစ်မရှိဘူးလို့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ...
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ကုန်တွင်းပိုင်း ဝင်လာလို့ မြောက်ကိုရီးယားမှာ အမြင့်ဆုံး တပ်လှန့်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ မိုးသည်းထန်ပြီး သစ်ပင်တွေ အမြစ်က ကျွတ်ထွက်ကာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာ မြောက်ကိုရီယား ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဒီနေ့သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ အစောပိုင်းက ကုန်းတွင်းပိုင်း ဝင်လာလို့ အမြင့်ဆုံး တပ်လှန့်ထားပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ လဲကျတာ၊...
❖ တောင်သူတွေ၊ အလုပ်သမားတွေနဲ့ အသေးစား အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ဝင်ငွေ အပါအဝင် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ GDP ကို နှစ်စဉ် ၂၀ % တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ (PPP) က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလ ပိုကြာခဲ့ရင် အခြေခံပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး ပြင်ဆင်ပေးထားဖို့ တိုက်တွန်း
(ကိုဗစ်-၁၉) ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ကာလ အခုထက်ပိုမို ရှည်ကြာလာခဲ့ရင် အခြေခံပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးတွေအတွက် အစိုးရအနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပေးဖို့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး၊ အဂတိပပျောက်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့က မေတ္တာရပ်ခံ ပန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ https://youtu.be/dqmPY5vrszc
● KNU / KNLA သည် အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုများအား အဓိက ထောက်ခံမှုပြုခဲ့သည်။ ● ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်း ဒေသများတွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KNU/KNLA အကြား တိုက်ပွဲများသည် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်...
● အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို ခုခံသော လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများအကြား လူမျိုးစုအချင်းချင်းအကြား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အတွက် အတားအဆီး တစ်ခုမှာ ထိုကဲ့သို့သော အုပ်စုများအကြား နယ်မြေ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်သည်။ ● လွန်ခဲ့သော လများအတွင်း...
အမေရိကန်က တရုတ်ဂျာနယ်လစ်တွေကို ထွက်သွားအောင် လုပ်ရင် တရုတ်ပြည်မကြီးမှသာမက ဟောင်ကောင်မှာ အခြေစိုက်နေတဲ့ အမေရိကန် ဂျာနယ်လစ်တွေကိုပါ မောင်းထုတ်ပြီး တရုတ်အစိုးရက လက်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့ ဂလိုဘယ်တိုင်းမ် အယ်ဒီတာချုပ် ဟူ ရှီကျင်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ကတစ်ဆင့် ပြန်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၆၂၅၄၃ ဦး ရှိ
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ကနေတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေဟာ မေလ ၁ ရက်ကနေ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ၆၂၅၄၃ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလကုန်မှ ဒီနေ့အထိ ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးမှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား ၉၃၃၆ ဦးကို ကယ်ဆယ်ရေး၊ အထူးလေယာဉ်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ...
ခိုးဝင်တဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေနဲ့ ထိုင်း ယာဉ်မောင်း အဖမ်းခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လမ်ပန်ပြည်နယ်မှာ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့က တရားမဝင် ခိုးဝင်လာတဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူ ခုနစ်ဦးနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ထိုင်းယာဉ်မောင်းတစ်ဦးတို့ကို ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ဆာလီယမ်ဝမ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ဇူလိုင်လ ၃၀...
ရေနံချောင်း-ချောက်မှာ မိုးခေါင်လို့ နှမ်းနဲ့ မြေပဲ စိုက်ပျိုးမြေဧက အများအပြား ပျက်စီးဆုံးရှုံး
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေနံချောင်းနဲ့ ချောက်မြို့နယ်တွေမှာ မိုးခေါင်နေတဲ့အတွက် နှမ်းနဲ့ မြေပဲ စိုက်ပျိုးမြေဧက အများအပြား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို MCN ဿတင်းထောက် မတင်မာဆွေနဲ့ ထွန်းလင်းဦးတို့ရဲ့ သတင်းပေးပို့မှုမှာ တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ ဒေါ်ဝင်းကြည် (မြေပဲစိုက်တောင်သူ)ဇီးချိုပင်ကျေးရွာ၊...
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသား အများစု ဦးဆောင်ပြီး အစိုးရနဲ့ ရှေးရိုးစွဲတွေကို စိန်ခေါ်တဲ့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူတွေကို တော်ဝင် ထောက်ခံသူတွေကလည်း အပြိုင် ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ထမာဆတ် တက္ကသိုလ်မှာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူ ၃...
သီရိလင်္ကာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့ လေယာဉ် တိုက်ရိုက်ပျံသန်းပြေးဆွဲရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သိရီလင်္ကာ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် လျာထားခံရသူ ဒေါက်တာ နီလင် ဒီ ဆီလ်ဗာနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာလေကြောင်းလိုင်း (MAI) တာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲကို...
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကုန်က ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ပြည်နယ် ၁၈ ခုမှာ ဆင်လာကူ အပူပိုင်း မုန်တိုင်းကြောင့် မိုးသည်းထန်ပြီး ရေကြီးလို့ အနည်းဆုံး လူ နှစ်ဦးသေဆုံးပြီး အိမ်ခြေ ရာနဲ့ချီ ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
ဗီယက်နမ်ရောက် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့ မြန်မာသင်္ဘောသား နှစ်ဦး ပြန်သက်သာလာ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိပြီး COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရကြောင်း တွေ့ရှိရတဲ့ မြန်မာ သင်္ဘောသားနှစ်ဦး အပါအဝင် လေးဦးဟာ ရောဂါကနေ ပြန်လည် သက်သာလာပြီလို့ ဗီယက်နမ်တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ကြေညာပါတယ်။
ပုဂံဘုရား ၁၇ ဆူအတွင်း ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့် ယာယီ ပိတ်သိမ်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊ ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေဒေသအတွင်းရှိ ဘုရား ၁၇ ဆူအတွင်း ဘုရားဖူးတွေ ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ကို ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်ကစတင်ပြီး ယာယီ ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့က ညောင်ဦးခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး...
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဘုရား၊ စေတီတွေ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ ပြန်ဖွင့်မယ်
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယာယီပိတ်ထားတဲ့ ဘုရား၊ စေတီတွေကို ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက် မနက် ၄ နာရီ မှစတင်ပြီး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့က ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ဖားကန့်မြေပြိုမှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရသူတွေကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့သပေး
❖ သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ အရှင်ဉာဏိဿရဟာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသ၊ ဝှေခါမှော် မြေပြိုမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေရာကို ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့က ကြွရောက်ပြီး မြေပြိုမှု ဖြစ်စဉ်အတွင်း သေဆုံးခဲ့ကြရသူတွေကို မေတ္တာပို့သပေးခဲ့ပါတယ်။ ❖ ဇူလိုင်လ...
မြန်မာနိုင်ငံရောက် အာမေးနီးယန်း (Armenians) လူမျိူးများအကြောင်း သုတေသနပြု
❖ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ ရာစုနဲ့ ၁၇ ရာစု ကာလတွေ လောက်တုန်းကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာခဲကြပြီး အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ လူနည်းစုလေးသာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ အာမေးနီးယန်း (Armenians) လူမျိူးတွေ အကြောင်းကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုသုတေသနအသင်း (MCRS) ရဲ့ လူမျိုးစုလေ့လာမှုစာစဉ်ကနေ စာတမ်းပြုစု...
ပုဂံေဒသ အေမြအႏွစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းနဲ႔ ေဒသခံေတြ ၁/၅ ပါ၀င္ခြင့္ ရဖို႔လို
https://youtu.be/PwRtb_oi_wA ● ပုဂံေဒသရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထား ဆႏၵေတြ ပိုမိုပါ၀င္ေစဖို႔ ၂၀၁၉ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအတြက္...
အစိုးရကိုယ္တိုင္ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနဟုဆို
https://youtu.be/jBXGaKLXr1U ● ပုဂံေဒသ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း ၀င္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အေမြအႏွစ္ဧရိယာထဲမွာ ေဂါပကအဖြဲ႔႐ံုးေတြနဲ႔ ဟိုတယ္ေတြအျပင္ အေဆာက္အအံုသစ္ ေဆာက္လုပ္မႈေတြရွိေနၿပီး အစိုးရကိုယ္တိုင္က အဲ့ဒီလို ေဆာင္ရြက္ ေနတာဟာ...
၂၀၂၀ ပါတီစုံ အထှထှေေ ရှေးကောကပွှဲ
❖ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အထူးအစီအစဉ်မှာတော့ ထူးခြားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းတွေအပေါ် သုံးသပ်နိုင်ဖို့နဲ့အတူ ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်း‌ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတွေကို မြှင့်တင်နေသူ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုံးသပ်သူ ဦးရန်ကျော်နဲ့ ကျွန်တော် အံ့ဘုန်းမြတ်တို့က (တိုက်ရိုက် –...
❖ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေက သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကျဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးတွေအပေါ် ထိခိုက်နိုင်မလားဆိုတာ ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်း‌ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတွေကို မြှင့်တင်နေသူ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုံးသပ်သူ ဦးရန်ကျော်နဲ့ (တိုက်ရိုက် - Live) တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
၂၀၀၈ ခြေ/ဥ မဖျက်နိုင်သမျှ ထူးမခြားနားမို့ တန်းတူညီမျှရေး တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို မဲပေးဖို့လို
❖ ၂၀၀၈ ခြေ/ဥ ဖျက်သိမ်းပြီး အခြေခံဥပဒေအသစ် မပြဌာန်းနိုင်သမျှ ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေက ပေါ်ပေါက်လာမယ့် လွှတ်တော်တို့ အစိုးရဆိုတာ ထူးမခြားနား ဖြစ်နေမယ့် အခြေအနေမှာ တိုင်းရင်းသားအတွက် တန်းတူညီမျှရေး နည်းနည်းလေးမှ ပိုရရ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုသာ မဲပေးကြဖို့ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေများနှင့်...
ထိုးနှက် တိုက်ခိုက် မဲဆွယ်မှုတွေကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မိတ်ပျက်မှာစိုးရိမ်ဟုဆို
အပြိုင်အဆိုင် ထိုးနှက် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကနေ NLD ပါတီအနေနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ မိတ်ပျက်သွားမှာကို စိုးရိမ်တယ်လို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဆရာဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ❖ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက်...
ကိုဗစ်-ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေး ယန္တယားအသင့်ဖြစ်ပြီလား ?
ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေး ယန္တယားတွေ ဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာနဲ့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာတွေကို The Voice Weekly Journal ရဲ့ ဒုတိယ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဇေယျာသူ၊ ပြည်သူ့ခေတ်သတင်းမီဒီယာ အယ်ဒီတာ ဒေါ်လွတ်လပ်စိုးနှင့်အတူ ကျွန်တော် အံ့ဘုန်းမြတ်တို့က တင်ဆက်ပေးသွားဖို့...
ကိုဗစ်အန္တရာယ်အကြား မြန်မာ သတင်းမီဒီယာသမားများ
ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ အန္တရာယ်အကြားက သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့အတူ သူတို့အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီက အတွင်းရေးမှူး ကိုကျော်စွာမင်းနဲ့အတူ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ကိုသီဟသွေးတို့က ပါဝင်ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။
အမေရိကန်-တရုတ် ဆက်ဆံရေး အကြား မြန်မာ “ပဲလှော်ကြားက ဆား” မဖြစ်ဖို့
❖ အခုရက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် အမေရိကန်သံရုံးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ သံရုံးတို့အကြား အပြန်အလှန် ဝေဖန်ရေးသားမှုတွေ လူသိရှင်ကြား ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေမှာ အမေရိကန်-တရုတ် ဆက်ဆံရေး အကြား မြန်မာ "ပဲလှော်ကြားက ဆား" မဖြစ်ရအောင် ဘာတွေ သတိထားဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေလဲဆိုတာ...
လွတ်လပ်သန့်ရှင်းပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေအဖြစ် ကျင်းပနိုင်ရေး လက်တလော ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အရင်ကထက် ပိုမိုဆွေးနွေး၊ ပိုမို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ အဖြေရှာဖို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘင်္ဂလီ မွတ်စလင်အရေး အပါအဝင် ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အထောက်အထားတွေကို Facebook က စုံစမ်းသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ်လို့ ပြောပေမယ့် အထောက်အထားတွေ ထုတ်ပေးခြင်း မရှိဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ရုရှား ဟက်ကာတွေ ဗြိတိန် ဝန်ကြီး အီးမေးလ်က လျှို့ဝှက်ဖိုင်တွေ ခိုးယူ
ရုရှားထောက်ပံ့ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေက ကပ်ရောဂါ သတင်းမှားတွေ ဖြန့်နေ
ဆော်ဒီအတွက် သူလျှိုလုပ်ပေးမှုနဲ့ Twitter ဝန်ထမ်းဟောင်း နှစ်ဦးကို အမေရိကန် အရေးယူ
မန္တလေး လူငယ်သင်တန်းကျောင်းမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ လူငယ် နှစ်ဦး ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးမှုကို စတင်စစ်ဆေးနေပြီလို့ တာဝန်ရှိသူတွေက သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ သင်တန်းကျောင်းကို ကြီးကြပ်တဲ့ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်...
ဒေါင်းတို့မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်စီ ချမှတ်
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သမိုင်းမှတ်တမ်းပြုစုရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
စစ်တုရင်ကစားနည်းကို ကျောင်းတွေမှာ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ စစ်တုရင်အဖွဲ့ချုပ်ပြော
ငါးလကြာ ထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက် ရော်နယ်ဒင်ဟို ပြန်လွတ်လာ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အတုမှုနဲ့ ငါးလကြာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဘရာဇီး ဘောလုံးသမားဟောင်း ရော်နယ်ဒင်ဟိုကို ပါရာဂွေး တရားသူကြီးအမိန့်နဲ့ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တရားသူကြီး ဂူစတာဗို အမ်မာရီလာက ရော်နယ်ဒင်ဟိုရဲ့အစ်ကို ရောဘတ်တို ဒီ...
MNL ကလပ်အသင်းတွေကို COVID-19 စတင် စစ်ဆေး၊ ပြန်လည်ကျင်းပခွင့် ဆုံးဖြတ်မယ်
၂၀၂၀ နွေရာသီ အိုလံပစ်ကို ဂျပန်ပြည်သူ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းက ဆက်လက် ဆိုင်းငံ့စေလို
■ ဒီနေ့ ည MCN TV NEWS ရဲ့ THE REVOLUTION "တော်လှန်ရေး" အစီအစဉ်မှာတော့ - အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အောင်ပွဲခံမှုနဲ့ ကြေကွဲဖွယ် အရေးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ စပိန်တော်လှန်ရေး (၁၉၃၁-၃၉) ကနေ ဘယ်လို သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေ...
ဒီ PDF ကို ရည်ညွှန်းဖို့အတွက်ပဲ အလိုအလျောက် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသွင်ပြောင်းမှု အမှားတချို့နဲ့/ ဒါမှမဟုတ် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ တရားဝင် အသုံးပြု မှု အားလုံး အတွက် ကျေးဇူးပြု ၍ ဝက်ဘ်ဆိုက် ပေါ်ရှိ...
ခင်စုကြည်။ ။ HI (Honest Information) Website ( www.hiburma.net ) အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာ အဓိက အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ခု ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေရည်၊ မယ်လွန်း။ ။ HI (Honest Information) Website ( www.hiburma.net ) မင်းသားဖြစ်သူ လင်ယောက်ျားရဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မေးမြန်းနေတဲ့ ဇနီးသည်တဦးရဲ့ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မကြားဝံ့မနာသာ မေးခွန်းတွေကို ကလေးသံမပျောက်သေးတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး...
IMDb Rating – 6.3/10 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု (လူနည်းစု) တွေရဲ့ ဘဝတွေ၊ ခံစားချက်တွေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလိုသူတွေ အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကားအဖြစ် နက်ဖလစ်က...
စာရေးဆရာ နွမ်ဂျာသိုင်း ကွယ်လွန်
ဒေါင်းယာဉ်ပျံဘုံနံဘေးမှာ စာရေးလို့ထားချင်တယ်၊ အလယ်ကလူ စကားဝဲ၏၊ ယုံအောင်လည်းပြောတတ်တယ် လွမ်းအောင်လည်း ချွဲတတ်တယ်၊ တစ်ပင်တည်းရင်ထဲကနွယ် စတဲ့ အချစ်ဝတ္တုများစွာကိုရေးသားခဲ့သူ စာရေးဆရာ နွမ်ဂျာသိုင်း (ဦးဝင်းမြင့်မောင်) သည် ၂၇-၆-၂၀၂၀ (ယနေ့) နေ့လယ် ၁၂နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ပင်လုံဆေးရုံတွင် နှလုံးရောဂါဖြင့်...
ပြည်ပသို့ ရိုက်ကူးရေးသွားရောက်တော့မဲ့ ဟွန်ဘင်းနဲ့ ဟွမ်ဂျန်းမင်း ပါဝင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်
လာမဲ့ ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ပြည်ပသို့သွားရောက်ပြီး ရိုက်ကူးရေးများပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း Bargaining လို့ ယာယီအမည်ပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး တာဝန်ရှိသူများက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများကြောင့် ရိုက်ကူးရေးများကို ရပ်တန့်ထားရပေမဲ့ ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်ရိုက်ကူးတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း Bargaining ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုကို တာဝန်ယူထားတဲ့...
#ALIVE ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား လက်မှတ် ၂သိန်းကျော်ရောင်းရ
တောင်ကိုရီးယားမှာ ရုပ်ရှင်ရုံများကို ပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ပေးနေပြီဖြစ်ကာ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့က သရုပ်ဆောင် ယွန်းအယ်အင်နဲ့ ပတ်ရှင်ဟေးတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ #ALIVE ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်စတင်ပြသတဲ့နေ့မှာတော့ ယခင်ကနဲ့မတူပဲ လက်မှတ်ရောင်းအားစံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စတင်ပြသတဲ့နေ့မှာ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ပေါင်း အစောင်ရေ...
လာမဲ့ဇူလိုင်မှာ စစ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ ဝူးဒိုဟွမ်
မကြာခင်က SBS ရုပ်သံက ထုတ်လွှင့်ပြသသွားတဲ့ The King: Eternal Monarch ရုပ်သံဇာတ်လမ်းမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင် လီမင်ဟိုနဲ့ အပြိုင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သက်တော်စောင့် ဂျိုယောင်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဝူးဒိုဟွမ်ဟာ လာမဲ့ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့မှာ စစ်မှုတာဝန်ကို စတင်ထမ်းဆောင်တော့မယ်လို့...
မွေးလာမယ့် ကလေးအတွက် ကေတီ ပယ်ရီ သီချင်းရေးနေ
အဆိုတော် ကေတီ ပယ်ရီဟာ မွေးလာမယ့် သမီးလေးအတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ် ရေးနေပြီး နောက်ထွက်ရှိမယ့် သူ့ရဲ့ ငါးခုမြောက် အယ်လ်ဘမ်မှာ ထည့်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသား အော်လန်ဒို ဘွန်းနဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူ ကေတီ...
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ စတိဗ် ဘင် သေဆုံးမှု အဆုံးစီရင်ခြင်း ဖြစ်
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ ပရဟတိသမား စတိဗ် ဘင် သေဆုံးမှုဟာ သူကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်သွားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဟောလိဝုဒ် သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် အဲလိဇဘက် ဟာလေနဲ့ သားတစ်ဦး ရရှိခဲ့သူ စတိဗ် ဘင်ကို ဇွန်လ...
Batman အဖြစ် ပြန်သရုပ်ဆောင်ဖို့ မိုက်ကယ် ကိတ်တန် ဆွေးနွေးနေ
ဝါနာ ဘရားသား ကုမ္ပဏီက နောက်ထပ် ထုတ်လုပ်မယ့် DC ရုပ်ရှင် The Flash မှာ Batman အဖြစ် ပြန်သရုပ်ဆောင်ဖို့ မိုက်ကယ် ကိတ်တန်နဲ့ ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Batman (လင်းနို့လူသား)...
∎ ၇၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ဂုဏ်ပြုအထူးအစီအစဉ်
ကာ/ချုပ် အသစ် စစ်အာဏာရှင် မဖြစ်ဖို့နဲ့ ရပ်တည်ချက်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ဖို့လို
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် အနာဂတ် ခေတ်မီ – ဖယ်ဒရယ် – တပ်မတော် တည်ဆောက်ရေး
ဒေါက်တာအေးမောင် အစိုးရကို ဝေဖန်လို့ မဟုတ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန် ဟုဆိုသည့်အပေါ် အမြင်များ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အမြန်ဆုံး ကာကွယ်ပေးဖို့လို